Joogteynta - Baakaynta Hal-abuurka BXL
Baakadaha Joogtada ah ee Maanta iyo Berrito
Marka loo eego aragtida cilmi-baarista IBM, sii jiritaanku waxa uu gaadhay heer sare.Maaddaama macaamiishu ay si sii kordheysa u aqbalayaan sababaha bulshada, waxay raadiyaan badeecooyin iyo calaamado la jaan qaadaya qiyamkooda.Ku dhawaad ​​6 ka mid ah 10kii macaamiisha ee la waraystay ayaa raba inay beddelaan caadooyinkooda wax iibsiga si ay u yareeyaan saamaynta deegaanka.Ku dhawaad ​​8 ka mid ah 10kii jawaab bixiye ayaa tilmaamaya in sii jiritaanku ay muhiim u tahay iyaga.
Kuwa sheegaya inay aad/aad iyo aad muhiim u tahay, in ka badan 70% waxay bixinayaan qiimo lacageed dhan 35%, celcelis ahaan, sumadaha waara oo mas'uul ka ah deegaanka.
Joogteynta ayaa muhiim u ah adduunka oo dhan.BXL Creative waxay qaadataa mas'uuliyadeeda si ay u siiso macaamiisha caalamiga ah xal baakadaha saaxiibtinimo ee deegaanka waxayna gacan ka geysataa sababta joogtaynta caalamiga ah.
PLA: 100% biodegradable in composts warshadaha
Waxaan bixinaabiodegradablebaakadaha ay fududahay in la qabto oo bixisa kala duwanaansho ugu badan.
PCR: Walxaha balaastiigga ah ee dib loo warshadeeyay, yaree balaastiigga hal mar la isticmaalo
Marka hal-abuurka lagu daro xal xirmo eco ah.BXL Hal-abuurka ayaa ku guulaystay abaalmarinta Bandhigga ugu Fiican ee tartanka Mobius ee naqshadaynta xirmada Huanghelou.
Abuuritaanka xirmadan, BXL waxay isticmaashaa xaashida eco & xaashida si ay u dhisto qaab-dhismeedka santuuqa firfircoon, oo ay ku biirto naqshada garaafka si ay ugu daydaan muuqaalka dhismaha Huanghelou.Naqshadaynta xirmada oo dhan waxay soo bandhigtaa daryeelka deegaanka iyo mas'uuliyadda bulsho ee BXL Hal-abuurka, isla mar ahaantaana, waxay soo bandhigtaa quruxda farshaxanka.
Baakadaha saxarka la qaabeeyey, oo sidoo kale loo yaqaanno fibre-cayaar, ayaa loo isticmaali karaa sidii saxaarad fiber ah ama weel fiber ah, taas oo ah xal baakad eco ah, maadaama ay ka samaysan tahay walxo fibro ah oo kala duwan, sida warqad dib loo warshadeeyey, kartoonnada ama fiilooyinka kale ee dabiiciga ah (sida sonkorta, bamboo , qamadi caws ah), oo haddana dib loo warshadayn karaa ka dib meerto nolosheeda waxtarka leh.
Muhiimada sii kordheysa ee joogtaynta caalamiga ah ayaa ka caawisay in baakooyinka saxarada laga dhigo xal soo jiidasho leh, maadaama ay tahay mid sii xumaanaysa xitaa iyada oo aan la habayn goobta qashinka ama dib u warshadaynta.
Ku noolaanshaha Wanaagsanaanta Dabeecadda
Naqshada xirmadan waxay sidoo kale ku saleysan tahay fikradda deegaanka.Waxaa loo sameeyay summada bariiska eco ee ugu caansan Shiinaha Wuchang Rice.
Xirmada oo dhan waxay isticmaashaa warqad eco si ay u duubto xabadaha bariiska oo ay ku daabacdo sawirada xayawaanka duurjoogta ah si ay u gaarsiiso fariinta in calaamaddu ay daryeesho nolosha duurjoogta ah iyo deegaanka dabiiciga ah.Boorsada xirmada dibadda waxay sidoo kale ku saleysan tahay welwelka deegaanka, kaas oo lagu sameeyay suuf oo dib loo isticmaali karo sidii bac bento ah.
Tusaalo kale oo qumman oo muujinaya waxa xirmada ay bixiso, marka hal-abuurka lagu dhex daro xalka xirmada eco.
BXL Waxay abuurtaa nakhshad xirmokan iyadoo la isticmaalayo gabi ahaanba warqad eco ah oo keliya, laga bilaabo sanduuqa dibadda ilaa saxanka gudaha.Saxaarada waxaa lagu dulsaaraa lakabyo waraaqo ah oo jiingado ah, taasoo si buuxda u ilaalinaysa dhalada khamriga inta lagu jiro gaadiid kasta oo adag.
Oo sanduuqa dibadda waxaa lagu daabacay "The Disappearing Tibetan Antelope" si ay u gaarsiiyaan fariin bulshada in xayawaanka duurjoogta ah la waayo.Waxaan u baahanahay inaan hadda qaadno ficillo oo aan samayno waxyaabo u wanaagsan dabeecadda.